आज महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको ११३औँ जन्मजयन्ती मनाइदै — Sanchar Kendra
१महामन्त्रीमा कुन्तीसँग हारेपछि रेखा थापाले दिइन यस्तो प्रतिक्रिया, कसलाई के भनिन ?
२रेखा थापाको लज्जास्पद हार, उनको पक्षमा जम्मा कति मत आयो ?
३अध्यक्षमा लिङ्देनसँग हारेपछि कमल थापा फायर, क कसलाई के भने ?
४अब दैनिक दुई लाखलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइने
५सरकारमा आउने ओलीको घोषणा
६नेपाली कांग्रेस गण्डकीको मतगणना जारी, कुन उम्मेदवारको मत कति ? यस्तो छ ताजा परिणाम
७एमसीसी र महाअभियोग दलहरुबीच सहमति नभई अगाडि बढ्दैन- प्रचण्ड
८बर्थ डे’ मनाउन गएका युवा फर्किएनन, होटल मालिकसहित ११ जना पक्राउ परेपछि खुल्यो यस्तो रहस्य
९भारतमा ओमिक्रोनको सङ्क्रमण रोक्न मोदीले चाले यस्तो कदम, केछ नेपालको तयारी ?
१०प्राधिकरण प्रमुखलाई आयो मा’र्ने धम्की, को हुन् धम्क्याउन व्यक्ति ?
११राप्रपाको नयाँ नेतृत्व चुन्न मतदान जारी
१२कांग्रेस गण्डकी प्रदेश कार्यसमितिमा मनाङका दुईसहित सात जना निर्विरोध
आज महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको ११३औँ जन्मजयन्ती मनाइदै
काठमाडौँ । नेपाली साहित्यका विराट प्रतिभा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको ११३औँ जन्मजयन्ती आज स्वदेश र विदेशमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ।
महाकवि देवकोटाको जन्म विसं १९६६ मा कार्तिक कृष्ण औँसी अर्थात् लक्ष्मीपूजाका दिन काठमाडौँको डिल्लीबजारमा भएको थियो। दश वर्षको उमेरमा कविता लेख्न सुरु गरेका देवकोटाका थुप्रै महाकाव्य, खण्डकाव्य, निबन्ध, कथा, नाटक, उपन्यास, गीत, समालोचना र फुटकर कविता प्रकाशित छन्। उनले नेपाली साहित्यलाई सयभन्दा बढी कृति दिए। यी कृतिका माध्यमबाट देवकोटाले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाएका थिए।
नेपाली साहित्यमा आधुनिक महाकाव्य लेखनको थालनी गरेका देवकोटाको ‘मुनामदन’ खण्डकाव्य नेपाली भाषामा प्रकाशित हालसम्म सबैभन्दा बढी बिक्री भएको पुस्तक हो। नेपाली साहित्यमा स्वच्छन्दतावादी–प्रगतिवादी धाराका प्रवर्तक देवकोटाका रचनामा मानवतावाद, प्रकृतिप्रेम र क्रान्तिकारिता झल्कन्छ। उनका सिर्जनामा पूर्वीय र पाश्चात्य दर्शनको संयोजन पाइन्छ।
भारतका महापण्डित राहुल साङ्कृत्यायनले देवकोटा एक्लैलाई भारतका महाकवि सुमित्रानन्दन पन्त, जयशङ्करप्रसाद र सूर्यकान्त निरालाको संयुक्त रूपसँग तुलना गरेका थिए भन्ने मान्यता छ। नाट्यसम्राट बालकृष्ण समले देवकोटा ‘मुनामदन’, ‘शाकुन्तल’ महाकाव्य र ‘पागल’ कवितासँगै तीनपटक जन्मेको बताएका थिए।
विदेशी भाषामा नेपाली कृतिको अनुवाद र विदेशमा भएका विभिन्न सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरी नेपाली साहित्यको विश्वव्यापी प्रचारप्रसारमा समेत उनले महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए। महाकवि देवकोटाले अङ्ग्रेजी साहित्यका फ्रान्सिस बेकन, चाल्र्स ल्यासजस्ता १५ जना गद्य लेखकका निबन्धको चयन गरी विसं १९९७ मा ‘प्रसिद्ध प्रबन्ध सङ्ग्रह’ प्रकाशित गरेका थिए।
विसं २०१६ मा उनी शिक्षा तथा स्वायत्त शासनमन्त्री हुँदा नेपालभर नेपाली भाषालाई अनिवार्य विषयका रूपमा लागू गराएका थिए। हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरको जग्गा पनि उनकै शिक्षामन्त्रीत्वकालमा व्यवस्था गरिएको हो। वर्तमान नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको स्थापनामा सक्रिय योगदान दिनु देवकोटाको अविस्मरणीय देन मानिन्छ।
तीन महिनामा ‘शाकुन्तल’ महाकाव्य, दश दिनमै ‘सुलोचना’ महाकाव्य र एकै दिनमा ‘कुञ्जिनी’ खण्डकाव्य लेखेका देवकोटामा तुरुन्त कविता लेख्नसक्ने आशु कवित्वको क्षमता थियो। देवकोटाको कवि–प्रतिभा, कविताको गुणात्मक मूल्य र सङ्ख्यात्मक योगदान आज पनि अद्वितीय छ।
चरम आर्थिक अभाव र पारिवारिक वियोगसँगै राजनीतिक सक्रियताका बीच पनि उच्चस्तरका साहित्य नेपाल र नेपालीलाई प्रदान गर्नु उनको साहित्यिक विशेषता हो।
महाकवि देवकोटाले ‘पागल’ कवितालाई आफैले अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेका थिए। उनले पाश्चात्य ग्रीसेली स्रोतबाट अनेकौँ गाथाको नेपालीकरण गरेका थिए। विसं २०२४ मा प्रकाशित भएको ‘मायावीनी’ ‘सुन्दरी प्रोजर्पिना’ जस्ता खण्डकाव्य र ‘प्रमिथस’ महाकाव्य यसका उदाहरण हुन्। देवकोटाको एकमात्र उपन्यास ‘चम्पा’ हो।
थप २४६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, मृत्यु संख्या शून्य
राजनीति गतिरोधको निकास चुनाव नै हो- ओली
माओवादी केन्द्रले एकाएक किन गर्यो यस्तो निर्णय ?
राष्ट्रपति भण्डारीले एकाएक गरिन यस्तो आव्हान
१७ बुदे प्रस्ताव पारित, चुनावपछि ठूलो जनादेशसहित फर्किने उद्घोष
एमाले महाधिवेशन अपडेट- मतदान सकियो, कतिबेला सुरु हुन्छ मतगणना ?
कांग्रेस महाधिवेशनको चुनावी कार्यक्रम सार्वजनिक
४५ जिल्लाको परिणाम आउँदा देउवा र पौडेलमध्ये को अगाडी ? यस्तो छ ताजा अपडेट